Abaphawuli baseBukhosini bakhohliswe ngokuthi babuyekeze ingxoxo kaMeghan ngaphambi kokuthi isakazwe | Scrolla Izindaba
Abaphawuli baseBukhosini bakhohliswe ngokuthi babuyekeze ingxoxo kaMeghan ngaphambi kokuthi isakazwe
Kwividiyo yaku-YouTube enesihloko esithi “Sifakazele ukuthi Ochwepheshe BaseBukhosini Baqambe Amanga NgoHarry noMeghan,” abahlaziyi abane abahamba phambili basebukhosini babuyekeza ingxoxo ebhekwe ngabomvu ye-Sussex no-Oprah… bengayibonanga.
Abaphangi abadumile be-YouTube, uJosh Pieters no-Archie Manners, bakhohlisa ochwepheshe basebukhosini ukuthi banikeze izingxoxo enkampanini yezindaba mbumbulu ezinsukwini ezimbili ngaphambi kokuba uhlelo luka-Oprah lukhonjiswe.
Kule vidiyo, bakhombisa abaphawuli basebukhosini – uRichard Fitzwilliams, uDickie Arbiter, uVictoria Arbiter, no-Ingrid Seward – benikeza imibono yabo kwinhlolokhono becabanga ukuthi bazokhonjiswa kumabonakude ngokushesha ngemuva kwenxolovo.
UPieters ubuza ekuqaleni kwevidiyo ukuthi, “Ingabe labo ngoti abangochwepheshe basebukhosini, ababenethonya emphakathini, basebevele benqumile ngengxoxo kaHarry noMeghan ngaphambi kokuyibona? Yilokhu okwenzekile.”
U-Ingrid Stewart, umhlaziyi nomhleli oyinhloko wephephabhuku i-Majesty, uthe ku-Duchess yaseSussex, “emqondweni wami lokhu bekungumlingisi onikeza omunye wemidlalo yakhe emihle – kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni, uMeghan ubedlala.”
Umkhulumeli waseBukhosini uRichard Fitzwilliams uthe “bekungeyona inhlolokhono elinganiselwe,” wathi “u-Oprah ungumngani [kaHarry noMeghan] futhi ubanikeze indlela elula.”
Ngakolunye uhlangothi, ochwepheshe basebukhosini badalula ukuchema kwabo noHarry ikakhulukazi noMeghan. Bebevele benze isinqumo sokugxeka lezi zithandani.
UStewart kwenye indawo uthi “ukuzwa [uMeghan] ekhuluma ngamalungu omndeni asebukhosini akuzange kungimangaze nakancane. Ngicabanga ukuthi wayengahlakaniphile ukukwenza, kodwa uyilolu hlobo lowesifazane olufuna ukusho okuthile.”
Abahlambalazi baqhubeka nokuloba ochwepheshe ngokubacela ukuthi baphawule ngesimo sokulwa nokugoma kukaMeghan, lapho uDickie Arbiter ephendula khona wathi “Ngicabanga ukuthi ukuzicabangela kakhulu.”
UDickie Arbiter ubize ividiyo ye-YouTube “umkhonyovu” owahlelwa ukuthi “udukise ngamabomu.”
Khonamanjalo, uStewart noVictoria Arbiter abakakhulumi obala ngale nxolovo mbumbulu.
UFitzwilliams, nokho, uthe “kusobala ukuthi ubengazi ukuthi inxolovo bekuyinto nje yokubatinyela” nokuthi ukuphawula “kusetshenziswe ngaphandle komongo”.
Incazelo yomhlaziyi inqatshiwe ngokuphelele ku-Twitter, kepha omunye umsebenzisi wamtshela ukuthi, “Udalulwe ngabaseBukhosini.”